Vaovao - Aiza no tena fampiasa matetika ny jiro batenina mahatanty andro?
izanynitondra hazavana tri-porofodia IP65 sy IK08 naoty fiarovana.Manaova fitaovana anti-oxidation sy anti-corrosion manokana ary tombo-kase silicone mba hahazoana ny fepetra fiarovana amin'ny luminaire.
Ny fametahana toetr'andro dia matetika ampiasaina amin'ny tonelina, fiantsonan'ny fiara, trano fanatobiana entana, tobin-jiro, tohatra afo, andalan-tany ambanin'ny tany, vovoka bebe kokoa, izay misy jiro indostrialy, jiro fanorenana, toerana fitakiana vonjy taitra sy angovo.Matetika ireo toerana ireo dia mitaky drafitra fitsitsiana angovo, filàna maika, taham-pahavitrihana ambany, fikojakojana mora.
Noho izany, ny mpanjifa feno dia mila amin'ny lafiny rehetra, mampiasa ny lumen avo led chips, avo lenta polycarbonate fitaovana, nitarika mpamily, Adjustable microwave motion sensor (telo dingana), vonjy taitra LiFePO4 bateria back-up sy ny sisa.Ireo fepetra rehetra ireo mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra, fikojakojana mora ary mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ireto misy scenario fampiharana mahazatra:
Passage ambanin'ny tany
Ho fanampin'izany, mba hifanaraka amin'ny fepetra fametrahana samihafa, dia nanao karazana fametrahana telo samihafa izahay.Toy izao manaraka izao:
Ny Departemantan'ny QC dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao henjana, azafady jereo ny sary toy izao:
Fotoana fandefasana: Jan-21-2022